नाटक बाहिरको नाटक - पब्लिक समाचार
नाटक बाहिरको नाटक
७ महिना अगाडि / ४५६ पटक हेरिएको
गोठकृष्ण, उदयपुर -श्रावण-७,२०७७
ओइ ! सजन त हिँडेछ त, कराउँदै आयो सन्तोष । भैगो नि त भरै उहीँ कटारीमा भेटिन्छ, भन्दै झोला भएतिर गयो अनिल । हे मुला, कटारी हिँड्या होइन क्या । अनि काँ त ? खै त्यो त थाहा भएन । त्यस्को बाउले छैन गइसक्यो मात्र भन्यो । घरमा छैन । अब के गर्ने त ? तेस्को रोल अब सुजितले गर्छ, माग्ने तँ भ्याइहाल्छस् । जाउँ गरौँ भन्यो राजकुमारले । त्यत्तिकैमा कटारीको गाडि आई पुग्यो । सबै जना बस चढेर गयो ।
फु¥यो, फु¥यो मलाई फु¥यो भन्दै तीन वित्ता उफ्रउँला झै गरी कराउँदै आयो सजन । घोरिएर नाटकको फर्मेट बनाइ रहेका अनिल जंगियो । के फु¥यो ? ताइ न तुइ यहाँ नाटक कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोची राबेला कराएर, उसले आँखा ठुलो पारेर हे¥यो । सजन चुप लाग्यो । अलि परतिर झुण्ड बनेर गफी रहेका सुजित, कामना, अञ्जलीको पनि ध्यान यतै खिचियो । उनीहरु पनि नजिकै आए । कामनाले सुनाइ, सुजित माग्नेको रोल गर्दैन रे ।’ असली जीन्दगीमा मागी खान जु¥या होला नाटकमा किन गथ्र्यो त’ कुनामा अढेस् लागेर मादलको ताना कस्दै जिब्रो पिलित्त बाहिर निकाल्दै गरिरहेका जयप्रकासले हाँसो मिश्रित आवाजमा भन्यो ।
तैँले कलाई माग्ने भनिस् ए,मु-जी ’ भन्दै रिसले मुरमुरीदै सुजित जयप्रकास तिर बढ्यो । जुरुक्क उठेर बाटो छेक्यो अनिलले । च्याप्प समायो । तात्तो रिस नगर्न भन्दै जयप्रकासतिर फर्कियो । बोल्ने ढंग छैन, जे पायो तेही बोल्छ, गर्जियो अनिल । जयप्रकास चुप लाग्यो । अब रिहलसल शुरु गर्ने होइन । अञ्जलीले प्रशंग मोडी । राजकुमार र सन्तोस आकै छैन, सजनले भन्यो । उनीहरु बैँक गाएछन् । पैसा झिकेर बजारमा सामान पनि किन्नु छ । अलि ढिलो हुन्छ होला । ए, मेल गर्न त भन्नै विर्सिएछु । अनिलले सम्झे झै गरी गोजीबाट मोवाइल झिकेर डायल गर्न लाग्यो । फोन लाग्यो । उताबाट आबाज आयो, हेल्लो । मेल गर्नु पर्ने डकुमेन्ट यहीँ छुटेछ । मुकेशलाई पठाउँदै छु, अनिलले भन्यो कति समय लाग्छ ? हामी यहाँ बजारमा छौँ, अब आउन लागेको उताबाट आवाज आयो ।
ल, ल, मुकेश आइपुग्छ । मेल गरेर सँगै आउनु । ल, ल, भन्दै उताबाट फोन काट्यो । फोन गोजीमा हाल्दै अनिल समुह तिर फर्कियो सोध्यो अँ हामी हिजो काँ सम्म पुगेका थियौँ रे? सिन तीन सकि सकेका छौँ । जयप्रकासले सुनायो । अब रिभ्यु गरौँ । तेतीबेलासम्म उनीह? पनि आइपुग्छन् होला । सबै राजी भए । संगीत दे त जयप्रकास, भन्दै सजन, सुजीत, कामना, अन्जली, अनिल गोलो घेरा लाएर उभिए । जयप्रकास मादल बजाउँदै गीत गाउन थाल्यो ।
अलिअलि हार हो अलिअलि जीत
कोही छैन पराइ कोही छैन मीत
गीत सकियो । सबै साइड लागे । सुजित बीचमा आएर, घाँटी छोटो, हात किच्रिक्क पार्दै माग्नेको रोल गर्न लाग्यो । भएन, भएन भन्दै अनिलले रोक्यो । अलि रियल गर्न, नाटक ग¥या जस्तो नाटक नगर, खुलेर गर, भन्दै बीचमा गएर दु?स्तै माग्नेले जस्तै गरेर देखायो । तँलाई सुहाउने रैछ, यो रोल, तँ गर भन्यो सुजितले । सबै हाँसे । नकरा, भन्दै साइड लाग्यो अनिल । व्यस्त सडक वीचमा रहेको चोकको सिन गर्दैछन यिनीह? । अब पालो छ, पागलको रोल गर्ने सजनको । आफु बन आफु, अ? बन्न थाल्यौ भने यो संसारबाट हराउने छौ भन्दै आउँछ र माग्नेसँग ठोकिन्छ । माग्ने २ ?पिया दिनुस् हजुर भन्छ । पागलले भन्छ पख, मलाई मर्न दे अनि सबै तेरो । माग्ने खुसी हुँदै भन्छ, अपुताली । पागल ध्यान दिदैन । ऊ आफै कविता भने शैलीमा बरबराउँछ ।
मान्छेह? आफु विर्सिएर अ? बन्न लालायित छ यहाँ
मान्छेह? अहिले ठुलो बन्ने शुरमा
आफ्नै जिब्रो कटाउन चाहान्छ ।
आफ्नै मृगौला फेल गराउन चाहान्छ ।
आफ्नै छोरा मार्न चाहान्छ ।
यसरी किन बन्दै छ मान्छे अ? जस्तो ?
एकछिन रोकिन्छ केही उत्तर पाए झै मुस्कुराउँछ । माग्ने तिर हेर्दै, तँ आफु बन, अ? बन्न नखोज । पागलह? मलाई पागल भनिरहेछ, भन्दै बाटो लाग्छ । राम्रो छ भन्दै सबै ताली बजाउँछ । दोश्रो सिन शु? हुन्छ । अञ्जली तिम्रो डाइलग भन त अनिलको आग्रह । अञ्जली बीचमा आउँछ । तिमी आफु माथि पुगेर भ¥याङ झिकी, मलाई तान्ने अभियन गरिरहेका छौ । तिमी मसँगको बराबरी देखि डराउँछौ । यो कस्तो भ्रम हो तिम्रो ? ठान्छौ कि तिमी अगाडि छौ । सदियौँ देखि बराबरीमा छाँै हामी । तिमीलाई थाहा छ, मैले पनि घृणा गर्न थालेँ भने के हुन्छ । नडराउ, यद्यपि तिमीलाई म पे्रम गर्छु । डाइलगलाई बीचमा रोक्दै अनिलले भन्यो भएन, भएन यो झगडा गरे जस्तो भयो ।
अलि कविता शैलीमा भन, महिलाह?लाई उपस्थिती गराउ, महिला र पु?ष बराबरी छन्, भनेर बुझाउन खोजी राछौँ अनिलले एकै सासमा निर्देशन ग¥यो । तिमी माथि……… पुगरे भ¥याङ झिकी, यसरी भन । अनिलले हाउभाउ सहित संबाद बोलेर देखायो ।
गाईघाटको नाट्य क्षेत्रलाई अघि बढाउन दिनरात अहोरात्र खटिरहेका, समुह हो यो । उमेर सबैको बराबरी जस्तै छ । सबै २० देखि ३० वर्ष बीचका छन् । जोस छ, जवानी छ, सृजनशीलता छ , केही गरेर देखाउने जुनुन छ यीनिह?सँग । छैन त केबल यीनिह?को भावनालाई बुझ्ने परिवार, समाज र राज्य । उनीह?लाई रिस राग केही पनि छैन कसैसँग । समुहमा छलफल गर्छन् । अनि निष्कर्ष निकाल्छन् र भन्छन् यो पैसाको युग हो । यहाँ मान्छेलाई पैसा बाहेक केही चाहिएको छैन । आज पैसा पैसा भनेर कुदिरहेका छन् । भोली भाषा, संस्कार, कला, साहित्य भनेर फर्किने छन् ।
त्यसबेलासम्म टिक्नु छ, हामीले भन्दै दृढ बन्छन् । उनीह?को एउटा संस्था छ द्यान एण्ड द्यान । यहि सँस्थाको सदस्य हो सबै । यिनीह? आफै प्रस्ताब तयार पार्छन । पेश गर्छन । कार्यक्रम परे यसरी नै भेला हुन्छन् । नाटक गर्छन । समाजका विक्रिति विसंति, भाषा, भेषभुषा संस्कारलाई बाहिर ल्याउँछन र समाजलाई सु सुचित गर्छन् । यिनीह?को एउटा शाझा सपना छ । गाईघाटमा नाटक घर निर्माण गर्ने, नियमित नाटक प्रर्दशन गर्ने, र गाईघाटका कला संस्कृतिलाई विश्वबजार सम्म पु¥याउने । अहिले यीनिह?सँग ६ जिल्लामा गर्नु पर्ने एउटा कार्यक्रम छ । यो कार्यक्रम उनीह? जस्तै काम गर्ने अर्को संस्थाले उपलब्ध गराएको हो । साहित्य, संगीत, भाषा, मल्टीमेडिया लगायत प्राविधिक ?पमा दक्ष छ यो समुह ।
अनिल अहिले यो संस्थाको अध्यक्ष छ । राजकुमार र सन्तोष सचिब र कोषाध्यक्ष हो । त्यही भएर उनीह? बैंक र बजार गएका हुन् । यिनीह?लाई भोली हिड्नु छ । नाटक देखाउनु । यति बेला दिनको १२ बजेको छ । मध्यान्न दिनमा सबै भेला भएका छन् । गाइघाटको सिटिहलमा, आज चार पाँच दिन भयो । उनीह?ले यहाँ भेला भएर रिहलसल गरेको । आज सबै नाटक गर्दा चाहिने सामाग्री, बाटोमा चाहिने प्रथामिक उपचारका सामाग्री जुटाएर भोली हिड्दैछन् । १५ दिनको प्लानीङ गरेका छन् उनीह?ले । पहिलो दिन कटारीमा दुइ सो नाटक गर्ने, त्यही बाँस बस्ने, दोश्रो दिन घुर्मिमा नाटक देखाउने त्यही बास बस्ने त्यसरी नै ओखलढुङगा, सोलु, खोटाङ बाट पुन गाइघाट झर्ने । दुई दिन रेष्ट गरेर फेरी सिराहा सप्तरी जाने भन्ने योजना छ । यनिीह? भोली विहानै ५ः०० बजेको बसमा जाने गरी छुट्छन् ।
सजन घर पुग्दा बेलुका तेस्तै ५ बजेको थियो होला । आगन टेक्ने वित्तिकै उनलाई बाले भने तैले अस्ती एप्लाइ गरेको ठाउँमा भिषा झरेछ । भोली बेलुका ७ बजेको फ्लाइट छ रे । तँ भोली विहानै काठमाण्डौ जानु । सामानह? प्याक गर्नु । उनले केही पनि बोलेन । केही भनोस् पनि कसरी । नाटकमा हिँडेको कुरा परिवारले मन पराउँदैन थियो । उनले नाटक गर्छु भन्दा उनलाई बा आमाले आफ्नै शैलीमा सम्झाएको थियो । तेरो उमेर भनेको कमाउने जमाउने उमेर हो । नाटक साटक भनेर नबस् । त्यसले तँलाइ जिन्दगी भरि पुग्छ ? कि विवाह गर, कि विदेश जा । यसरी उसलाई दुइटा मात्र अप्सन दिएको थियो । तँसँगैको साथीले कति कमाइसके । घरजम गरी सके । तँ चाहीँ नाटक भनेर बस्छस् । हामी दिनदिनै डाडाँमाथिको घाम भइसक्यौँ । कति यो बुढो छाला घोटेर खान्छस् ? यसरी उनलाई बाआमाले गनगन गरेको थियो ।
त्यही दिन उसले भनेको थियो । म विदेश जान्छु । त्यसै अनुसार, राहादानी बनायो । विदेश जाने फर्मालिटी पुरा ग¥यो । त्यस्कै फलस्व?प भिषा झरेर उ जानु पर्ने भएको हो । उसलाई थाहा थिएन यति चाँडै भिषा झर्छ भनेर । सजन, गाह्रो जीउ लिएर पिढिमा बस्छ । आज उसलाई आफ्नै घर आफ्नै आगन पराइ जस्तो लागि रह्यो । सम्झियो, नाटक गर्दै साथीह?सँग बसेको क्षण, नाटक पछि साथीह?ले गरेको प्रशंसा । भोली नाटक देखाउनु हिड्नु पर्ने योजना । नाटकले दिएको नाम । गाइघाटमा नाटक घर बनाएर त्यसैबाट आत्मा निर्भर हुने योजना । खुइया ग¥यो । अनि सोच्यो, म बाहिर बसेर पैसा कमाउँछु । साथीह?ले यहाँ योजना अनुसारको काम गरे भने सहयोग गर्छु । पछि आएर जोडिन्छु । यस्तै के के सोच्यो अनि सबै लुगाफाटा प्याक गरेर सुत्यो । उसलाई थाहा थियो । साथीह?लाई भन्यो भने रोक्छन् । रिसाउँछन् । त्यसैले उसले केही भनेन ।
बिहान ४ः०० बजे आमाले टिका लगाएर विदा गरिन् । बा बसपार्कसम्म पु¥याउन आए । बसपार्कबाट काठमाण्डौको गाडी चढेर जाँदै गर्दा मोतिगडा चोकमा कटारी जान भेला भएका साथीह?लाई उसले देखेको थियो । विपरीत दिशा तिर फर्कियो दुइ थोपा आँशु चुहायो । हत्तपत्त कसैले थाहा पायो कि भने झैँ गरी आँशु पुस्यो । गाडी अगाडि बढ्यो । यसरी एउटा कलाकार पलायन भयो । विस्तारै, सजनले सोचे जस्तै सोच्दै सबै नाटक क्षेत्रबाट बाहिरिए । यसरी गाइघाटको नाटक क्षेत्र पुस्तौँ पुस्ता पछि परिरहेछ ।
बुधबार, साउन ०७, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
यस्तै हो आफु त हाँसिन्छ मज्जाले